कलाक्षेत्रमा हास्यव्‍यंग्य भिटामिन जस्तै हो – Tufan Media News
कलाक्षेत्रमा हास्यव्‍यंग्य भिटामिन जस्तै हो
७ मंसिर २०७६, शनिबार ०९:०१
काठमाडौं :कलाकारिता र हास्यव्यंग्य क्षेत्रमा चर्चित नाम हो सुबोध गौतम। लामो समयदेखि अनवरत रूपमा क्रियाशील गौतम पछिल्ला दिनमा ‘एदुमे’ पात्रबाट दर्शकमाझ परिचित छन्।
नेपाली हास्य विधामा रमाएका गौतमको क्यारिकेचर मात्र सुनियो भने हुबहु नेता बोलेको आभास हुन्छ। उनी केवल नेता वा कलाकारको मात्र आवाज निकाल्दैनन् नयाँ आवाज सिर्जना गर्ने खुबी पनि राख्छन्। क्यारिकेचरमा उनको अनुभव, यसभित्रका विभिन्न पाटाहरूबारे थाहाखबरकर्मी राजु पौडेलले उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पदित अंश :
अहिले हाम्रो हास्यव्यंग्यको अवस्था कस्तो छ?
हास्यव्यंग्यको अवस्थाबारे म आफैँ पनि खोजी गरिरहेको छु। अनुसन्धानकै सिलसिलामा छु। हरेक व्यक्तिले फरकफरक कुरालाई हास्यव्यंग्य भनिरहेका हुन्छन्। कसैले कसैलाई उडाउनु पनि हास्यव्यंग्य हो। मैले आफैँलाई उडाउनु पनि हास्यव्यंग्य हो। तर, कसलाई उडाउनुपर्ने हो त्यसलाई छानेर उडाउनु नै हास्यव्यंग्‍य हो। अहिलेको हास्यव्यंग्‍य धमिलिएको छ। सङ्लिन बाँकी छ।
कला क्षेत्रमा हास्यव्यंग्य कत्तिको स्थापित भएको छ?
हास्यव्यंग्‍य हास्‍नका लागि मात्र होइन। मान्छेको जीवन उपयोग गर्नका लागि यो जरुरी छ। हरेक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिका लागि यो भिटामिन जस्तो हो। अहिले चलचित्र, लेखनमा पनि हास्यव्यंग्‍य स्थापित भइरहेको छ। यसको महत्व दिननुदिन बढ्दो क्रममा छ।
क्यारिकेचर गडगिफ्ट वा अभ्यास, के भन्‍नुहुन्छ?
दुवै हो। दुवै होइन पनि। भगवानको वरदान हो भनौँ भने मैले अभ्यास पनि गरिरहेको छु। अभ्यासकै शक्तिले जुनसुकै बेला जो कसैको आवाज निकाल्न सक्छु। अभ्यास मात्रले हो भनौँ भने किन सबैले निकाल्न सक्दैनन् त? तर, ठोस उत्तर मसँग पनि छैन।
क्यारिकेचर क्षेत्रमा तपाईंको यात्रा कसरी सम्भव भयो?
हरेक मान्छेलाई आफ्नो क्षमता देखाउने लोभ लाग्छ। पारिवारिक वातावरणले पनि मलाई क्यारिकेचर क्षेत्रमा सहयोग मिलेको हो। अर्को कुरा देशको राजनीतिक अस्तव्यस्तताले पनि मलाई यस क्षेत्रमा आकर्षण बढेको हो। किनकि म राजनीतिक घटनामा पनि प्रयोग भएको व्यक्ति हुँ।
क्यारिकेचर गर्नु भनेको सामान्य विषय हो, अथवा काम गर्दै जादाँ सहज हुने कुरा हो?
हरेक काम झन् बुझ्यो झन कठिन हुन्छ। मान्छेलाई सुरुमा रमाइलो लाग्छ र मैले संसारै जितेँ जस्तो लाग्छ। काम गर्दै जाँदा गहिराइ बुझ्दै गइन्छ। अपेक्षा बढ्दै जान्छ। क्यारिकेचर कला कठिन छ। यसभित्र बहुआयामिक विषय छन्। जसमध्ये काम गर्ने तरिका पनि हो। क्यारिकेचरमा मौलिकता जरुरी छ। मौलिकता बचाउनु अहिलेको अवस्थामा मुख्य चुनौती हो। क्यारिकेचरमा मौलिकता मुख्य विषय हो। मौलिकता शब्द जोडिनेबितिक्कै सहज होइन भन्ने कुरा प्रष्ट भइहाल्छ।
अनुहार बिगार्दैमा क्यारिकेचर हुँदैन भन्ने भनाइमा कत्तिको सहमत हुनुहुन्छ?
खासमा अनुहार बिगार्ने ट्रेण्ड अहिले चलेको छ। अनुहार बिगारेर धेरैभन्दा धेरै क्यारिकेचर गर्छु भन्ने भ्रमले दुर्घटना निम्तिने सम्भावना हुन्छ। कहिलेकाहीँ अनुहारको भावभंगी पनि बिगार्नुपर्छ। गलत प्रवृत्तिलाई गलत भन्न जरुरी छ।आफू नांगो हुने र अरुलाई पनि नंग्याउने दुवै गलत कुरा हुन्। अनुहार बिगार्नुको पनि एउटा सीमा हुन्छ। यो कुरा कलाकारले बुझ‍्‍न जरुरी छ।